White Cottage Training – Cellar Door Distribution
White Cottage Training
home / news & events / White Cottage Training
Cellar Door Distribution ရဲ့ Sales Manager တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုအေးကျော်မှ White Cottage Restaurant မှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို Wine Knowledge Basic Training ကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုလို White Cottage Restaurant နဲ့အတူ Cellar Door Distribution မှ Partnership အဖြစ် ပူးပေါင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း များစွာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင်တန်းပို့ချခဲ့စဉ်က အမှတ်တရ ပုံလေးတွေအားလုံးကို အားလုံးပြန်လည်ခံစားနိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ Cellar Door Distribution မှ နောက်ထပ် ဝိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ သိကောင်းစရာအကြောင်းအရာတွေ၊ Training တွေကို အစဉ်မပြတ်ဆက်လက် တင်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်လို့ ဝိုင်ချစ်သူတို့က စောင့်မျှော်ပေးပါဦး…
#Foodies #Wines #Drinks
One of Cellar Door Distribution’s Sales Manage, Thomas @Aye Kyaw has been successfully provided Wine Knowledge Basic Training to all White Cottage Restaurant staff.
We are really proud to beapartnership with them and Let us share the memorable images to enjoy back. In the future, we will share wine knowledge information more and more. So enjoy your times with us.